Filannoon Naayijeeriyaa torbee tokkoof dheerate – Fana Broadcasting Corporate
Filannoon Naayijeeriyaa torbee tokkoof dheerate
Finfinnee, Gurraandhala 9, 2011 (FBC)-Guyyaa har’aa ni gaggeeffama jedhamee eegamaa kan ture filannoon Preezdaantummaa Naayijeeriyaa torbee tokkoof dheerachuu Koomishiniin Filannoo Biyyoolessaa Naayjeeriyaa beeksiseera.
Filannoon jalqabuuf sa’aatiin shan yemmuu hafu ibsa kan kennan itti gaafatamaan koomishinichaa Mahmuduu Yakubuu akka jedhanitti, ‘ ‘ Adeemsi filannoo haala karoorfameen hin argamne.’’
Filannoo walabaa fi haqa qabeessa ta’e gaggeessuuf jecha guyyaa filannichaa dheeressuuf murteessuun barbaachisaadha jedhaniiru koomishineerichi.
Koomishiniin filannichaa walgahii ariifachisaa taa’uun guyyaan filannoo akka dheeratu murteessuu dubbataniiru.
Torbeewwan lamaan darbanitti kutaalee biyyaatti muraasatti wajjiirri koomishinii filannichaa balaa ibidaan gubachuu ni yaadatama.
Balaa kanaaniis meeshaaleen dijitaalaa kaardii filannoo dubbisan hedduun faayidaan ala ta’uu kan dubbatame yoo ta’u, naannoolee bulchiinsa 36 keessaa naannoolee muraasatti meeshaleen filannoo akka hin guune dubbatameera.
Haaluma kanaan filannoon Naayijeeriyaan mana maree fi preezdatummaaf gaggeessitu sanbata dhuftu akka adeemsifamu ibsameera.
Xiyyaaronni waraanaa Raashiyaa Veenzuweelaa galuun isaanii ibsame
Preezdaant Doonaald Traamp Raashiyaa waliin shira hin xaxne-Roobeert Muulaar
Daandiin Qilleensaa Garudaa Indooneezhiyaa waliigaltee bittaa Booyiing 737 Maaks 8…
Veenzuweelaan hin tasgabboofne
Atileetonni Ityoophiyaa waldorgommii maraatoonii…
Arbanyooch Ginboot 7 marii Baahir Daaritti taasisuuf waame…
Barsiisaa gara laaftichi badhaasa Doolaara miiliyoona 1…
Xiyyaaronni waraanaa Raashiyaa Veenzuweelaa galuun isaanii…